Muqdisho: Banaanbaxa 2aad oo ay Murashaxiinta ku dhawaaqeen -Video - Horseed Media • Somali News
February 22, 2021Federal Republic of Somalia
Muqdisho: Banaanbaxa 2aad oo ay Murashaxiinta ku dhawaaqeen -Video
Midowga Murashaxiinta Madaxweynaha Soomaaliya ayaa shir jaraa’iid oo ay maanta ku qabteen magaalada Muqdisho ku iclaamiyey inay qorsheenayaan banaanbax labaad oo Jimcaha Soo socda ka dhaca Taalada Daljirka Daahsoon ee magaalada Muqdisho.
Banaanbixii dhacay Jimcihii lasoo dhaafay ayaa ku dhamaaday rabshado kadib markii ay ciidamada Dowlada ee ku sugan KM4 ay rasaas la beegsadeen murashaxiinta oo horkacayey dad shacab oo kasoo horjeeda xukuumada xiligeeda dhamaaday.
“…Weerarkii 19kii wuxuu ah iskuday dil oo la doonayey in lagu dilo murashaxiin, dad baa ku dhintay kuna dhaawacmay, waxaana cad inaysan weli muuqan garawsho…Waxaan rabnaan inaan cadeyno inaanan ka tanaasulin mawqifkeena iyo xuquuqdeena oo ah banaanbax nabadeed oo ay dadka Soomaaliyeed fikirkooda ku cabiraan oo ka dhici doona isla goobtii Daljirka Daahsoon…”
Guddomiyaha Midowga Murashaxiinta Shiikh Shariif ayaa sheegay inay sii wadi doonaan banaanbaxooda isagoo markale ku celiyey in uu yahay banaanbax nabad ah isagoona sheegay in banaanbaxa uu kamid yahay aasaaska hoose ee bulsho madax banaan.
“…Hadaan maanta xaqiijin weyno 60 sano kadib inaan banaanbax nabadeed qabano waxa hortaagan waa diktatooriyad iyo dowlad burburin…” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shiikh Shariif.
Shiikh Shariif ayaa sidoo kale iska fogeeyey inaysan jirin cid kale oo iyaga magacooda ku hadli kara, hadalkaasi oo u muuqday in loogu jawaabayey hadalkii Indhacade ka jeediyey Daljirka Daahsoon, hadalkaasi oo la rumeysan yahay in xukuumada marmarsiinyo uga dhigatay weerarkii lagu qaaday Hotel Ma’ida oo ay degenaayeen Madaxweynayaashii hore Shiikh Shariif, Xasan Shiikh Maxamuud iyo Guddoomiyihii hore Shariif Xassan.
Wuxuu Shiikh Shariif u mahadnaqay Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland halkii ay iska taageen falalkii ka dhacay magaalada Muqdisho jimcihii lasoo dhaafay.
Dhinaca kale Hogaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isagu si adag uga hadlay in dhacdadii 19kii Feberaayo sidaa looga tagi doonin hadii aan xal loo helina aysan jirin wax doorasho ah oo ka dhaceysa dalka.
“…Wadan aan banaanbax ka dhici karin, kama dhici karto Doorasho…”
Cabdiraxmaan Cabdishakur ayaa ugu baaqay Beesha Caalamka inaysan indhaha ka qarsan danbiyadii ka dhacay magaalada Muqdisho.